Warar - Miyay tallaalku is-wada-19 yahay mid mudan in la qaato haddii aysan boqolkiiba boqol waxtar lahayn?
Talaalku ma yahay mid qaali ah-19 haddii aysan boqolkiiba boqol waxtar lahayn?
Wang Huaqing, oo ah khabiirka weyn ee barnaamijka talaalka ee Xarunta Shiinaha ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, ayaa sheegay in tallaalka la oggolaan karo oo keliya haddii waxtarkeedu la kulmo heerarka qaarkood.
Laakiin habka looga dhigo tallaalka mid wax ku ool ah ayaa ah in la ilaaliyo xaddiga caymiska ee sarreeya lana xoojiyo.
Xaaladahaas oo kale, cudurka si wax ku ool ah ayaa loo xakameyn karaa.
Tallaalku waa hab aad uga wanaagsan oo looga hortago cudur, loo joojiyo faafitaankiisa, ama loo yareeyo baaxadda cudurrada faafa.
Hadda waxaan haynaa tallaalka COVID-19.
Waxaan ka bilownay tallaalista meelaha muhiimka ah iyo dadka muhiimka ah, ujeedkeenu waa in aan dhex dhigno caqabado xagga difaaca ah oo ka dhex jira dadweynaha iyada oo loo marayo tallaal habeysan, si loo yareeyo xoojinta gudbinta fayraska, ugu dambayntiina aan ku guuleysanno himilada ah joojinta cudurrada faafa iyo joojinta gudbinta.
Haddii qof kastaa ka fikiro hadda tallaalku boqolkiiba boqol, ma helayo tallaal, ma dhisi karo caqabadkeenna difaaca, sidoo kale ma dhisi karo difaac, mar haddii uu jiro meesha laga helo infekshanka, maxaa yeelay baaxadda weyn badankood wax difaac ah ma lahan, cudurku wuxuu ku yimaadaa caan, sidoo kale wuxuu u eg yahay inuu ku faafo.
Xaqiiqdii, faafa iyo faafitaanka soo ifbaxa tallaabooyinka lagu xakameynayo, qiimuhu waa mid aad u ballaaran.
Laakiin tallaalka, waxaan siinaa waqti hore, dadka waa la tallaalaa, iyo inbadan oo aan siino, ayay sii kordheysaa caqabadda difaaca jirka, xitaa haddii ay jiraan faafitaanno faafa ee fayraska, ma noqonayo cudur faafa, waana wuxuu joojiyaa faafitaanka cudurka inta aan jeclaan lahayn. ”ayuu yiri Wang Huaqing.
Mr Wang wuxuu yiri, tusaale ahaan, sida jadeecada, xiiq-dheertu waa laba cudur oo faafa oo xoog leh, laakiin talaalka, iyadoo aad u sarraysa, iyo in la xoojiyo caynkan oo kale, ayaa ka dhigtay in labadan cudur si wanaagsan loo xakameeyo, cudurka jadeecada ee ka yar 1000 kii ugu dambeeyay sanadkii, oo gaadhay heerkii ugu hooseeyay taariikhda, xiiq-dheerta ayaa hoos ugu dhacday heer hoose, Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in tallaalka, oo leh dabool aad u sarreeya, caqabadda difaaca ee dadka ay tahay mid la hubiyay.
Dhawaan, Wasaaradda Caafimaadka ee Chile waxay daabacday daraasad dhab ah oo adduunka ah oo ku saabsan saameynta ka hortagga tallaalka Sinovac Coronavirus, oo muujisay heerka ka hortagga ka hortagga ee 67% iyo heerka dhimashada ee 80%.